घरेलु फुटबल कहिले सम्म यसरी चल्छ ? | Hamro Khelkud
घरेलु फुटबल कहिले सम्म यसरी चल्छ ?
पाँचथर– नेपाल फुटबलको मैदान भित्र जति चर्चा हुन्छ । त्यो भन्दा धेरै चर्चा मैदान बाहिर हुनेगर्छ । अघिल्लो महिना अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को गल्तीको कारण रुस्लान थ्री स्टार क्लबले एएफसी कपको प्ले अफ खेल्न नपाए बाट नेपाली फुटबल केही समय मैदान बाहिर निकै चर्चामा रह्यो । केही दिनअघि मात्र नेपालको महिला टोलीले भारतको सिलगुढी पुगेर साफ च्याम्पियनसिपमा भाग लिएर फर्कियो । सिलगुढी जानुअघि जुन चर्चा महिला टोलीले पाउला भन्ने अपेक्षा थियो, भारतसँग सेमिफाइनलमा हारेसँगै तात्न खोजेको मौहोल सेलायो ।
तर, अहिले केही महिनायता चर्चा मैदान बाहिर भन्दा भित्रकै छ । केहि सहरमा हुने गोल्डकपले देशको फुटबल चलायमान देखिएको छ, सिमित मात्रामा भएपनि । २०७० मा ए डिभिजन लिग र २०७१/७२ मा राष्ट्रिय लिग भएयता न ए डिभिजन लिग हुन सकेको छ, न राष्ट्रिय लिग नै । नेपाली फुटबलको बिकास गर्छु भनि जिम्मा लिएर बसेका कहिले भ्रष्टचारको आरोपमा निलम्बन त कहिले गैर जिम्मेवारी कारणले चर्चामा आउदा नेपाली फुटबल झन् ओरालो लाग्ने संकेत देखिएपनि राष्ट्रिय टोलीका पछिल्ला केही सफलताले अझै पनि आशा गर्ने ठाँउ बाँकी छ ।
पूर्वमा अहिले एक पछि अर्को गोल्ड कप चलि रहेको छ । काँकरभिट्टामा गोल्डकप र फिदिममा फाल्गुनन्द गोल्ड कप संगसंगै चलिरहदा खेलाडी दिन दिनै खेली रहेका थिए । कहिले तराइमा त कहिले पहाडमा उनिहरुलाइ भ्याइ नभ्याइ छ । बर्षभरीको खेतीको बाली उठाउने शैलीमा उनीहरु मैदानमा सक्रिय छन् ।
ब्यस्त हुने खेलाडीहरुमा झापाका खेलाडी अग्रपक्तिमा छन् । कहिले काही उनीहरु नेपालमा मात्र होइन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत खेल्न जाने गरेको छन् । कर्ण लिम्बु, थ्री स्टारबाट खेलिसकेका विजय धिमाल ,रोजिन धिमाल, देबेन्द्र तामाङ, दीपक राई लगायतका नाम चलेका पूवेर्ली खेलाडी यतिखेर व्यस्त छन् । पूर्व फुटबलमय बन्दा पूर्वेली खेलाडी मात्र होइन पश्चिम र काठमाण्डौका खेलाडीहरु पूर्वमा भेटिनु स्वभाविक हो । विमल घर्ति मगर , निराजन खड्का ,हेमन गुरुङ , एलन न्यौपाने लगायतका खेलाडी पूर्वकै प्रतियोगितामा भेटिने खेलाडी हुन् ।
झापा ११ (फाइल तस्बिर -सुरेन दाहाल)
यसरी गोल्ड कपबाट खेलाडीलाई केही आर्थिक टेवा त पुग्ला, तर यसरी बढेको भबिष्य बिनाको गोल्डकपहरुले फुटबलमा व्यवसायिकता कायम गर्न कठिन छ । च्याउ उर्मे सरह गोल्डकप हुँदैमा नेपाली फुटबलले विकास गर्र्यो भन्न मिल्ला ? भबिष्यको टुंगो नभएका गोल्डकपले मात्र फुटबलको विकास गर्छ भन्ने छैन । राजधानीमा गतिविधि शून्य जस्तै हुँदा चर्चाका हिसाबले भने गोल्डकपले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
लिग नहुदा व्यवसायिक भनिएका कुनै क्लबले खेलाडी अनुबन्ध गरेका छैनन् । दिनै पिच्छे क्लब फेर्दै खेलाडिहरु फुटबल खेल्न बाध्य छन् । पौष १६ गते पाँचथरमा कर्ण सिं सोनाम स्मृति क्लब ताप्लेजुङबाट फुटबल खेलेका बिजय धिमाल खेल सकिए लगतै काँकरभिट्टा तर्फ रुपन्देहि ११ को लागि खेल्न झापा ओर्लिए । दिपक राई ,हेम गुरुङ लगायतका टिम झापा झरे । पौष १६ गते काँकरभिट्टामा झापा ११ बाट खेलेका कर्ण लिम्बु १७ गते बिर्ता युनाइटेडको नामबाट फुटबल खेल्न पाँचथर आए । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता खेलाडीको सुचि लामै बन्छ । खेलाडीले न त पर्याप्त आराम पाएका छन् ।
यसो हेर्दा खेलाडीहरु एक पछि अर्को खेल र क्लब बाट फुटबल खेल्दा आर्थिक रुपमा थोरै फाइदा होला, तर खेलाडीले पर्याप्त आराम नपुग्दा त्यसको चर्को मुल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ । समान्यता फुटबलमा ४८ घन्टाको आराम खेलाडीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने छ। तर, हामीका २४ घन्टा भन्दा कम समयमा खेलाडी मैदानमा उत्रेको थुप्रै उदाहरण छन् । अहिले आर्थिक रुपमा केहि सबल बने पनि यसरि खेलेर भबिष्य नरहेको फाल्गुनन्द गोल्ड कपमा भेटिएका एक खेलाडिले गुनासो पोखे । उनले खेलाडी ब्यस्त जस्तो देखिए पनि क्लबहरुले राम्रो पारिश्रमिक नदिएको बताए ।
एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाको पतन र खेलमिलेमतोको प्रकरण पछि नेपाली फुटबलले अहिले केहि गति लिएको छ । एक पछि अर्को उपाधि जितेर देशको शिर ठाडो पार्ने काम गरेको मात्र गरेको छैन, अझै सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने आशा सञ्चार गरेको छ । एक तरिकाले भन्ने हो भने अहिले नेपाली फुटबल तातिएको छ ।
जितेर आए सम्मान र पैसाको घोषण गरेरमात्र नेपाली फुटबलको बिकास भयो भन्नु केहि दिनको रमाइलो मात्र हो । कुनै बेला हामी भन्दा पछि रहेको भुटानले अहिले यति ठुलो फड्को मार्दा नेपाली फुटबलको समिक्षा गर्न जरुरी छ कि छैन ? देशमा लिग हुन छाडेको छ , देशका सिमित केही सहरमा हुने गोल्ड कपले कहिले सम्म नेपाली फुटबल धान्ला ? यो प्रश्न नेपाली फुटबलको व्यवस्थापन र विकासको जिम्वेवार लिएर बसेका सरोकारवाला संग गर्न चाहान्छु । दुइ बर्ष देखि लिग सञ्चालन हुन सकेको छैन । यो बर्ष पनि हुने नहुने अझै कुनै टुंगो छैन , यही अवस्था रहे नहुने सम्भावना बढी छ ।
पछिल्ला सफलताले नेपाली फुटबल विगतमा गलत नेतृत्वको कारण पछि परेको भन्न सकिएला । तर आउने दिनमा पुरानो नेतृत्वलाई दोष थोपरेर अहिलेको नेतृत्व उम्कन पाउदैन । अहिलेको नेतृत्वलाई फुटबलको सफलता जोगाइ राख्ने चुनौती पहाडकै रुपमा खडा छ । देशमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको एउटा खेलमैदान छैन ,भएको खेलमैदान खेल्न लायक छैनन् । अहिलेको एन्फा नेतृत्व केहि सफलताले दंग परेर बस्ने हो असफलता निश्चित प्राय छ । यो सफलताबाट उत्साहित हुनेमात्र होइन, यो साखलाइ कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने योजना र त्यहि अनुसारको कार्यक्रम ल्याउनमा ढिलाई गर्नु हुन्न ।
पुरस्कार घोषण गर्न आतुर हुने सरकारलाई भौतिक पूर्वाधार निमार्णका लागी तयार पार्न एन्फाले भूमिका खेल्नै पर्दछ । केहि सहरमा हुने गोल्डकप आयोजनालाई स्वीकृत दिएर एन्फाको जिम्मेवारी पुरा हुँदैछ । महिला र पुरुष दुवैका लागि ग्रासरुट कार्यक्रम ,युवा परियोजना, लिग,राष्ट्रिय टोलिको तयारी पुरा गर्न सक्दामात्र एन्फा हुनुको अर्थ रहन्छ । एन्फाको नेतृत्वले एउटा पाटो मात्र होइन फुटबलको सबै पक्षलाई उत्तिकै महत्व र ध्यान दिनु पर्छ । । फुटबल बिकासको लागि लिग सञ्चालनका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यान जाओस् ।
जय नेपाली फुटबल